सार्है दुःखद खबर: परदेशको सडकमै अस्तायो यी नेपाली चेलीको सपना, भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > सार्है दुःखद खबर: परदेशको सडकमै अस्तायो यी नेपाली चेलीको सपना, भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली!
admin October 19, 2020 जीवनशैली, प्रवास	0
कुवेत / झापा ।
मेचीनगर–२, भृकुटीकी २७ वर्षीया प्रज्ञा प्रधानको कुवेतमा भएको सवारी दु,र्घटनामा मृत्यु भएको छ। अक्टोबर ९ तारिखका दिन प्रधान चढेको सवारीसाधनलाई अर्को सवारीसाधनले ठक्कर दिँदा दु,र्घटना भएको हो। कुवेतको आदान अस्पतालमा उपचारका लागि पुर्‍याइए पनि शनिबार बिहान उनको मृत्यु भएको थियो।
उनलाई अस्पताल पुर्‍याई शल्यक्रिया गरिए पनि अत्यधिक र,क्तश्रावका कारण शनिबार बिहान मृ,त घोषित गरिएको थियो। पौडेलले मृ,तक प्रधान र उनकी दिदी रीता माया प्रधान कामबाट फर्किँदै गर्दा दु,र्घटनामा परेको बताए।
अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरु बन्द
जिवनमा दु:खबाट मुक्ति पाउन सोमवार गर्नुहोस् यी पाँच काम
लगातार चर्चित २ अभिनेताहरूकाे निधनले बलिउड नै यस्तो शोकमा!
हङकङमा ३७ वर्षीय गुरुङको दु:खद निधन